March 15, 2020 - CeleLove
ကိုယ့်အပေါ် ၁ကျပ်ဖိုးကောင်းရင် ၁ဝဝဖိုးလောက် ပြန်ကောင်းတတ်သော သောကြာသားသမီးများအကြောင်း
ကိုယ့်အပေါ် ၁ကျပ်ဖိုးကောင်းရင် ၁ဝဝဖိုးလောက် ပြန်ကောင်းတတ်သော သောကြာသားသမီးများအကြောင်း “သောကြာသားသမီးများ အကြောင်း” အပြောအရမ်းကောင်းပီး နှုတ်ချိုတာ သောကြာ …၊ အဓိက မျက်လုံးရယ် နှုတ်ခမ်းရယ် ဆွဲဆောင်မှု ရှိကြတယ် …။ စိတ်ခံစားမှု အရမ်းလွယ်တတ်ပေမဲ့ ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ သူတွေပါ …။ အချစ်လည်းအရမ်းကြီးသလို အမြက်လည်း အရမ်းကြီး […]
ဘဝမှာ မပူမပင်၊မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာနေနိုင်မယ် ဗုဒ္ဓယတြာ
ဘဝမှာ မပူမပင်၊မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာနေနိုင်မယ် ဗုဒ္ဓယတြာ နံနက် အိပ်ယာထချိန်တွင် မိမိတို့အိမ်တွင် ရှိသော မြတ်စွာဘုရားကို မျက်နှာသစ်တော်ရေ၊ သောက်တော်ရေချမ်း ကပ်လှူပါ …။ မျက်နှာသစ်တော်ရေနှင့် သောက်တော်ရေချမ်း ကပ်လှူသောအခါ ဘဒ္ဒကမ္ဘာတွင် ပွင့်တော်မူသော သဗ္ဗညုတ မြတ်စွာဘုရားကို ဘုရားတပည့်တော်၊ တပည့်တော်မသည် မျက်နှာသစ်တော်ရေနှင့် သောက်တော်ရေချမ်းကို သဒ္ဒါကြည်ဖြူစွာ […]
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို အရူးအမူးချစ်နေကြောင်း ဘယ်လိုနိုင်သိမလဲ …?
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို အရူးအမူးချစ်နေကြောင်း ဘယ်လိုနိုင်သိမလဲ …? (1) သူကြိုက်သောအစာများကို သင်နဲ့ ခွဲဝေစားခြင်း အထူးသဖြင့် ယောက်ျားတွေဟာ သူများနဲ့အစားဝေမျှစားရတာ မကြိုက်ပါဘူး။ သင့်ချစ်သူဟာ သင် သူ့ပန်းကန်ထဲက ဟင်းတွေနှိုက်စားတာကို ချစ်စနိုးကြည့်နေတတ်ရင် သင့်ကိုအရမ်းချစ်လို့ဖြစ်ပါတယ် …။ (2) အသံဖိုင်များပို့ခြင်း ရိုးရိုးစာရိုက်ခြင်းထက် အသံဖိုင်များပို့တယ်ဆိုပါက သင့်ကို […]
၁၃၈၂ခု (၂၀၂၀) အတွက် မဟာသင်္ကြန်စာ ဟောစာတမ်း မဟာသင်္ကြန် ကျချိန် – ၁၃၈၁ ခု ၊နှောင်းတန်းခူလပြည့်ကျော်(၆)ရက် ၊၂၀၂၀ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၁၃)ရက် တနင်္လာနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညစက်(၁၁)နာရီ၊(၃၄) မိနစ်၊(၁၈)စက္ကန့်။မဟာသင်္ကြန်အကြတ်မနေ့ – ၁၃၈၁ ခု၊နောင်းတခူးလပြည့်ကျော် (၇) ရက်၊၂၀၂၀ ခုနစ်၊ဧပြီလ(၁၄)ရက်၊အင်္ဂါ နေ့နှင့်နှောင်းတန်ခူးလပြည့်ကျော် (၈) ရက်၊ခရစ်နှစ်၂၀၂၀ခုနှစ်ဧပြီလ […]
မနာကျည်းသေးဘူးလား…ကိုယ်က သူ့အပေါ် တွယ်တာမြတ်နိုး သလောက် ကိုယ့်ကို ချောင်ထိုးထားတဲ့သူကို။
မနာကျည်းသေးဘူးလား…ကိုယ်က သူ့အပေါ် တွယ်တာမြတ်နိုး သလောက် ကိုယ့်ကို ချောင်ထိုးထားတဲ့သူကို။ တမ်းတနေတုန်းပဲလား ကိုယ့်ဘက်က အရာရာနားလည် ပေးထားတာတောင် တန်ဖိုးမထားပဲ စွန့်ပစ်သွားတဲ့ သူကို။ သတိရနေတုန်းပဲလား…အရမ်းချစ်ပါတယ်ပြောပြီး အချိန်တိုင်းနာကျင်မှုတွေသာ ပေးတတ်တဲ့ သူ့ကို။ မမေ့နိုင်သေးဘူးလား ကိုယ်ကသာ သူ့အတွက် အမြဲတမ်းပထမနေရာ ဦးစားပေးပေမဲ့သူ့ဘက်ကျ ကိုယ့်အတွက်ဆို အပျင်းပြေ လိုသုံးသဘောထားတဲ့သူကို။ […]
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ (၇) နေ့ သားသမီးများအတွက် တပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁၅.၃.၂၀၂၀) မှ (၂၁.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ (၇) နေ့ သားသမီးများအတွက် တပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁၅.၃.၂၀၂၀) မှ (၂၁.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် (၁၅.၃.၂၀၂၀) မှ (၂၁.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့ အထိတစ်ပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်းများပါ … ။ အားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရှယ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. […]
“လက်ရှိ ကိုယ့်ဘ၀ကို အားမရလို့ စိတ်ကုန်နေတဲ့ အခါ ဒီပို့ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။”
“လက်ရှိ ကိုယ့်ဘ၀ကို အားမရလို့ စိတ်ကုန်နေတဲ့ အခါ ဒီပို့ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။” ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ချစ်ခင်လာဖို့ နည်းလမ်း (၁၀) ခုပါ …. ။ သူတို့ဘ၀ကိုသူတို့ မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့မှာ ရှိနေတဲ့ အရာတွေနဲ့ မပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါဘူး။ အကယ်၍ သင်လည်း အဲလိုပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် […]
(၁၈)လအတွင်း သိန်း (၁၅၀) စုနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူလေးရဲ့ ငွေစုနည်းလေးပါ
(၁၈)လအတွင်း သိန်း (၁၅၀) စုနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူလေးရဲ့ ငွေစုနည်းလေးပါ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသား အများစုက အိမ်က ပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးပဲ သုံး၊ ကိုယ့်ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာ ဘယ်လောက်မှ မရှိသေးတဲ့ အချိန်မှာ လိမ္မာပါးနပ်လှတဲ့ ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးကတော့ ဒေါ်လာ (၂၀,၀၀၀) အထိ စုပြသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် …။ သြစတေးလျ ကွင်းစ်လန်းမှာ […]